တတိယမြောက်သမီးတော်: August 2012
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ သာသနာ ရောင်ဝါနေသို့ လင်းပါစေ
4 comment Links to this post Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
အရွယ်သုံးပါးစလုံး ကာမဂုဏ်၌ မနေကောင်း
ရှေးလွန်လေပြီးသောအခါ မှုးမတ်တစ်ဦး၏သား (ဘုရားလောင်း) နှင့် ပညာရှိတစ်ဦး၏သား ငယ်သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် ရှိကြလေ၏။ အရွယ်ရောက်ကြသောအခါ မိဘများမှ တက္ကသိုလ်ပြည် ဒိသာပါမောက္ခထံ စေလွှတ်၍ အတတ်ပညာများ ဆည်းပူးစေ၏။ မူး
မတ်၏သားသည် ယောက်ျားတို့ တတ်အပ်သော အတတ်ပညာ (၁၈) ရပ်တို့ကို ကောင်းစွာ အထူးကြိုးစားတတ်မြောက်ပြီး ပညာရှိ သူတော်ကောင်း၏သားမှာ အတတ်ပညာများ တတ်မြောက်သော်လည်း တိုင်းရေပြည်ရာ၌ စိတ်ဝင်စားမှုနည်းကာ သူတော်ကောင်းစိတ်ထားမျိုးဖြင့်သာ အေးချမ်းစွာ နေလိုသောဆန္ဒရှိ၏။
0 comment Links to this post Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
ကိလေသာတောတွင် နှစ်မျောနေသူများပီပီ လိုချင်ရချင် ပျော်ချင်ပါးချင်ကြသည်။
ထိုထိုသော လောဘစေရာနောက်ကိုလိုက်ရင်း ဘ၀ မောတွင် မျှော်လင့်ရင်းရှင်သန် ရှင်သန်ရင်းမျှော်လင့်
ကာ အဓိပ္ပါယ်တို့က လေးနက်မြင့်မား ခွန်းအားတွေအပြည့်ဖြင့် ဘ၀ ကိုချီတက်ကြသည်။
မျှော်လင့်စရာရှိသူတို့ က ထိုကဲ့သို့ မျှော်လင့်ရှင်သန်ကြသော်လည်း မျှော်လင့်စရာဘာမှမရှိသည့်မိန်းမသား
တစ်ယောက်၏ဘ၀ ။ ဘာဆက်လုပ်သင့်သလဲစဉ်းစားတိုင်း ကိုယ့်ကို ကိုယ် သေမိန့် ပေးနေမိသည်။
နေခြင်းထက် သေခြင်းကို အလိုရှိခဲ့ပြီ။
သစ်ပင်ပင်စည်မှာ မျက်စိစုံမှိတ် အံ ကိ်ုကြိတ်၍ စိတ်နောက်ကိုယ်ပါ မိုက်ကန်းစွာ .......
14 comment Links to this post Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
ကျေးဇူးရှင် ဆားတောင် ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ သြ၀ါဒတော်များ
၁။ ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ် တရားကတော့ အားထုတ်ရမှာပဲ။ အားထုတ်ခွင့်ကြုံတုန်း အားထုတ် ကြ။ သာသနာပပြီဆိုရင် ၀ိပဿနာနဲ့ တွေ့ရမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒီတော့ ပိုနစ်နာတယ်။
... ၂။ တရားအားထုတ်ဖို့တော့ မအားဘူး။ မအားဘူးလို့ ပြောကြတယ်။ သေချိန်ကျလာလို့ မသေ ချင်ဘူးလို့ ပြောလို့ရတာ မဟုတ်ဘူး။ မအားဘူးလို့ ပြောလို့ရတာ မဟုတ်ဘူး။
၃။ တရား အားထုတ်တယ်ဆိုတာ အားနဲ့မာန်နဲ့ အားထုတ်ရတယ်။ မသေချာ မရေရာတဲ့ အ လုပ်တွေတောင်မှ ဟုတ်နိုးနိုး၊ တော်နိုးနိုးနဲ့ သက်စွန့်ဆံဖျား လုပ်နေရတာပဲ။ သေချာရေရာတဲ့အလုပ် ဘာမလုပ်ရဲစရာ ရှိလဲ။ ဆင်းရဲ တစ်ဘ၀ပေါ့။ တစ်ဘ၀တောင်မှ ခဏလေးပါ။
5 comment Links to this post Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
သမီးတော် ရဲ့ ဆရာဘုန်းဘုရား
ဓမ္မရံသီ ဆရာတော် ဘုရား၏ တရားတော်များကိုနာကြားရန်
ဓမ္မရံသီ ဆရာတော်၏ တရားတော်များ
ပိဋကတ်သုံးပုံ မြန်မာပြန် စာအုပ်များ
ဓမ္မ စကား နေ့တိုင်းကြားက
မိမိ ကဲ့သို့မဂ္ဂသစ္စာကို
ဤ ဘလော့ကို တည်ဆောက်
ပို၍လည်းကောင်း ၊ ကောင်းစွာ
တစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့ 
ပြီ ဟူ ၍ ပီတိ ဖြစ်လိုပါ၏။
သတ္တ၀ါ အပေါင်း သစ္စာသိ၍
ဆင်းရဲ ချုပ်ငြိမ်းကြောင်းအမှန် နိရောဓ သစ္စာ။
ဆင်းရဲမှလွတ်ကြောင်း အားထုတ်မှုအမှန် မဂ္ဂသစ္စာ
ဟူ၍ မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ် က
ဤသစ္စာလေးပါးဖြင့်သာ အားထုတ်ကြိုးပမ်း အရောက်လှမ်းနိုင်ပါမည်။မဂ္ဂသစ္စာ ကိုအားထုတ်ရာ၌
လမ်းစဉ်ကိုကျင့်ခြင်း။) ဖြင့်သာ မြတ်စွာဘုရားသည်
နိဗ္ဗာန် ကိုမျက်မှောက်ပြုခဲ့လေသည်။ အစွန်းရောက်
သောကျင့်စဉ်များဖြင့် မိစ္ဆာဒိဌိ မဖြစ်ကြစေလိုပါ
အလှူရှင်များသို့ ကျေးဇူးတင်လွှာ
Domain အလှူခံရရှိထားသော ဘာသာရေးဆိုဒ်များ
ဒီဃနိကာယ် သီလက္ခန် ပါဠိတော် လောဟိစ္စသုတ် (1)
ဓမ္မရံသီ ဆရာတော် (22)
ကြည်ညိုမိရာ အဖြာဖြာ (3)
ဘာသာရေး အသိပညာဗဟုသုတ (39)
မိုးကုတ်ဆရာတော် ဘုရား နောက်ဆုံးမိန့် ကြားရွှေသြ၀ါဒတော်များ (4)
မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရား၏ တရားတော်များ (4)
မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး တစ်ဘ၀ သာသနာ (40)
မြန်မာလူမျိုး ဗုဒ္ဓ ဘာသာ (3)
အထူး အစီအစဉ် (11)
အထူးအစီအစဉ် ဒု အကြိမ် (1)
ကျေးဇူးရှင် ဆားတောင် ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ သြ၀ါဒတော်မျ...
Е Наинг Лин
http://3rdthameetaw.blogspot.com/2012/05/blog-post_07.html. Powered by Blogger.
တရားအကြောင်းလေးတွေ မျှဝေရင်းနဲ့ ကုသိုလ်ယူနေချင်သူတစ်ယောက်ပါ....
ဗုဒ္ဓဂယာဒေသမှ စေတနာအလင်း အန္တိမဗောဓိ ကရုဏာဖောင်ဒေးရှင်း
မယား ကိုလိုချင်၍ လင်အား ရာထူး ပေးအပ်ခြင်း
မြတ်စွာဘုရားရှင် ကိုယ်တော်မြတ် ဇေတ၀န် ကျောင်းတော်မှာ သတင်းသုံးတော်မူစဉ် အခါက ပသေနဒိကောသလ မင်းကြီး ဟာ တခုသော ပွဲသဘင်မှာ ကကြီးတန်ဆာဆင...
ကိလေသာတောတွင် နှစ်မျောနေသူများပီပီ လိုချင်ရချင် ပျော်ချင်ပါးချင်ကြသည်။ ထိုထိုသော လောဘစေရာနောက်ကိုလိုက်ရင်း ဘ၀ ...
ဒိဌိ သုံးမျိုးနှင့် ၀ိစိကိစ္ဆာ သဘော အကျဉ်းချုပ် အထူးမှတ်ဖွယ်
# အရှိထင်ရှား။ ခန္ဓာငါးပါး။ရုပ်နာမ် တရားကို " သက္ကာယ " လို့ ခေါ်ပါတယ်။ # သက္ကာယ ကို ငါပဲ သူပဲ ယောက်ျား မိန်းမ ကလေး လူကြီး လူ န...
ဆံကေသာ ထုံးနှောင် ပိတုန်းရောင်အသွေး ဇရာဝင်ပျက်ရှာကြတယ် နက်ရာက ဖွေး။
ကိုယ်ပိုင် အရည်အချင်းနဲ့ဆို ဒီတသက် သူဋ္ဌေး ဖြစ်မှာမဟုတ်တဲ့ သူ
လတ်တလော အာဏာစက် ပြင်းထန်နေတဲ့BPP Challenge လေးကြောင့် ဘလော့ရွာလေး အတော်ကိုစည်ကားသိုက်မြိုက် နေပါတယ်။
သမီးတော်နေတာက ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းထဲက မြို့ တစ်မြို့ ဖြစ်တာကြောင့် တက္ကသိုလ်ကို လားရှိုးမှာ တက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီတုံးက လားရှိုးက တက္ကသိုလ်မဖြ...
လျှပ်တစ်ပြက် ရာဂ နှင့် မိမိ စိတ်ကို တန်ပြန် ထောက်လှမ်းခြင်း။
လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ် တစ်ခုကျော်ကတည်းက အရောင်ကော အဆင်းပါ နှစ်သက်လို့ ဝယ်ထားတဲ့အ၀တ်ကလေးတစ်စုံကို တူမလေးကိုပေးဝတ် မိပါတယ်။
လှူလိုက်တဲ့အလှူဘယ်သူ အကျိုးရှိသလဲ
ဒါန ဆိုတာ ပေးသူအတွက် အကျိုးဖြစ်ထွန်းတာထက် ယူသူ အတွက် အကျိုးဖြစ်ထွန်းတယ် ဆိုတာကို စံထားပြီး မြတ်စွာဘုရားက အဖြေထုတ် ထားပါတယ်။ အလှူတက...
ခန္ဓာဖြင့် သက်သေပြသွားသော ဘဘ ဦးအုံးရီ
♦♦♦၀ိပဿနာ အကျိုး(၇)မျိုး♦♦♦ ည...
ထောက် ကနဲ ………..
ရွှန်းလက်ကယ် ကြယ်စင် ငယ်စဉ်က မျက်စိ ...
Copyright (c) 2010 တတိယမြောက်သမီးတော်. Designed by Bloggers Template | Blogger Templates | Best Credit Cards